यसकारण प्रहरीको नो’टिस मा परेका थिए लोकबहादुर ! – Dailny NpNews
यसकारण प्रहरीको नो’टिस मा परेका थिए लोकबहादुर !
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र २८, २०७८ समय: १०:५७:४२
काठमाडौं: संखुवासभाको मादी–१ खोलागाउँका एकै परिवारका ६ जनाको ह,त्यापछि अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीले ह,त्याको एक साता नबित्दै अभियुक्त प’क्रा उगरी आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। घटनामा सफलतापूर्वक अनुसन्धान गरेको भन्दै प्रहरीले वाहवाही त कमाएको छ नै प्रहरीले छोटो समयमै कसरी ह,त्याराको पहिचान ग-यो भन्ने कौ’तुहलता पनि उ’ब्जेको हुन सक्छ । यहाँ हामीले यही पाटोलाई केलाएका छौं ।
ह,त्या घ’टनापछि अनुसन्धानका लागि प्रदेश १ का डीआईजी अरुणकुमार बीसी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का डीएसपी रुगम कुँवर,संघीय प्रहरी इकाइबाट एसपी भीम ढकालको टोली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाका डीएसपी लालध्वज सुवेदीको टोली, इलाका प्रहरी कार्यालयको अर्काे टोली पुगेको थियो । ती सबै टोलीले आ आफ्नो तवरले अनुस’न्धान प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । फलस्वरूप ह,त्याको पाँचौं दिन प्रहरीले २६ वर्षीय लोकबहादुर कार्कीलाई ह,त्या अभियोगमा प’क्रा उ ग¥यो ।
यसरी सुरु भयो अनुसन्धान : घटनास्थलमा प्रहरी पुगि सकेपछि सूक्ष्म ढंगबाट अध्ययन सुरु भयो । सुरुमा घटनास्थल हेर्यो। यसले पनि लोकबहादुर नै शं’काको घेरामा परे। तर उनी प्रहरीसँगै अग्रसर भएर घटनास्थलमै खटिएका थिए। लोक बहादुरको घरभन्दा करिब २० मिटरको दूरीमा मात्रै तेजबहादुर माथि सुरुमा प्र’हार भएको थियो। जहाँ र’गत देखिन्थ्यो। त्यहाँबाट ल’डेर तल सडकको कु’नामा थियो श,व।
लोकबहादुरको घरनजिकैको सुरुमा प्र’हार गरिएको स्थानबाट देखिँदैनथ्यो। तर तेजबहादुरकी आमा बिरामी भनेर त्यहाँ जाँदै गरेका माथिल्लो घरका कक्षा १० मा पढ्ने लोकबहादुरका भाइ नाता पर्नेलाई उनले भने छन्, ‘भाइ यहाँ हेर त बडौलाई कसले मा,रेछ!’ उनले जहाँबाट त्यसो भनेका थिए त्यहाँबाट श,व देखिँदैनथ्यो। बडाबा (बडौ)को ह,त्या भएको कुरा पनि कसैलाई थाहा थिएन । लोकबहादुरले बाटामा र’गत देखिना साथ कसरी बडाबाको ह,त्या भएको भने? प्रहरीको ‘नोटिस’मा पर्यो।
अर्को कुरा, लोकबहादुरको परिवारकै ह,त्या गर्ने मनसायले बाहिरको मान्छेले गरेको हुन्थ्यो भने उनकै घर नजिक ह,त्या हुनुपर्ने हो । लोकबहादुरको घर नजिक किन ह,त्या गरियो ? योजनाबद्ध बाहिरको मान्छेबाट ह,त्या हुन्थ्यो भने यो ठाउँ हुँदैनथ्यो । यो घरका मान्छेले थाहा पाउलान् म समा’तिन सक्छु भन्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ बाहिरको मान्छेबाट ह,त्या होइन। फरक फरक ठाउँमा ह,त्या भएको छ। लोकबहादुर घरमै थिए भने कसरी थाहा पाएनन् ? यिनै कारणले लोकबहादुर माथि प्रहरीको निगरानी बढ्यो । गाउँका अरुलाई पनि प्रहरीले सोध्यो। लिखित रुपमा पनि धेरैसँग घटनाको बारेमा बुझ्यो। अरुमाथि प्रहरीको शं’का भएन।
कपडा र घटनास्थल बने प्रमाण : एकै परिवारका ६ जनाको ह,त्या चार ठाउँमा भएको थियो। घटनास्थलको अध्ययनपछि प्रहरीले योघटना धेरै जनाको संल’ग्नतामा भएको होइन भन्नेतर्फ देखियो। तेजबहादुरको सडकको कुनामा ह,त्या भएको थियो। त्यहाँबाट २५ देखि ३० मिटरको दूरीमा सासूबुहारीको ह,त्या भएको छ। सय मिटरको दूरीमा नातिनातिनाको ह,त्या भएको छ । वृद्धाको घरमै ह,त्या भएको छ। घटनास्थल हेरिसकेपछि प्रहरीले अनुमान गर्यो– चिनेको मान्छेबाटै घटना भएको हो । दोस्रो कुरा मानसिक रुपमा अस्वस्थ मान्छेले गरेको हुनुपर्छ।
प्रहरी भन्छ–हाम्रो अनुभवले पनि यसअघिका केही घटनामा मान’सिक रुपमा वि’क्षिप्त व्यक्तिहरुबाटै यस्ता घ’टना भएका छन्। प्रहरीले लेनदेनको विषयमा पनि अनुसन्धान ग¥यो। जग्गाजमिन र साँध सिमानाको वि’वादले भएको हो कि भनेर पनि अनुसन्धान ग¥यो । घर परिवारकै हात हुनसक्छ भनेर पनि अनुसन्धान गर्यो। खासगरी तेजबहादुरकी कान्छी बुहारी झापामा थिइन्। उनीमाथि पनि प्रहरीले शं’का नगरेको होइन। तर विषयमा ‘क्लु’ भेटिएन।
अनुसन्धानमा संल’ग्न प्रहरी भन्छन्– आर्थिक कारणले ह,त्या भएको हुन सक्छ भन्नेतर्फ पनि हामीले अनुसन्धान गर्यौं। यो परिवारले झापामा जग्गा किन्ने कुरा थियो। घरमा पैसा हुनसक्छ भनेर कसैबाट ह,त्या भएको हुन सक्छ भन्नेतर्फ पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो। तर घरभित्रै ८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ नगद भेटियो । घरमा भएका गरगहना पनि सुरक्षित नै भेटिए । ह,त्या गरिएका व्यक्तिले लगाएका गहना पनि लु’टिएका थिएनन् । योसँगै आर्थिक कारणबाट ह,त्या भएको होइन भन्नेमा पुग्यो प्रहरी । लोकबहादुर भने सुरुबाटै प्रहरीको निगरानीमा थिए। अरु शं’कामा बल नपुगेपछि प्रहरीले लोकबहादुरको घर नै खा’नतलासी गर्यो।
घरभित्र रहेको बाकसमा लोकबहादुरको हा’फपेन्ट भेटियो। त्यसमा र’गत लागेको थियो। अर्को कालो भे’स्टमा पनि र’गत भेटियो। ‘यी कुराले हामीलाई उसैले ह,त्या गरेको हो भन्नेमा झन् नजिक पु¥यायो’, अनुस’न्धानमा संल’ग्न प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘सुरुमा लोकबहादुरलाई प्रहरीले सोधीखोजी गर्दा सिधै अ’स्वीकार गर्थे।’ ‘तर पछि विस्तारै प्रमाण दिनुहोस् न! प्रमाण दिन सक्नुभयो भने म स्वीकार्छु भन्न थाले’, अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् । प्रहरीले तीन दिन दिनरात उनलाई निय’न्त्रणमै राख्यो । अन्ततः उनले ह,त्या स्वीकार गरे। घटना कसरी र किन भयो भन्ने कुरा बताए।